> Resource> DVD> Olee otú iji Play DVD na Windows 10
N'oge na-adịbeghị Mircosoft mara ọkwa na a ga-Ọ dịghị DVD playback Nkwado maka Windows 10 si Windows Media Player. The isi ihe mere mgbanwe a na atụmatụ bụ ikikere ụgwọ na Microsoft nwere ịkwụ ụgwọ na-akwado atụmatụ dị ka DVD playback na sistemụ arụmọrụ. Nke a nwere ike ka ị na-ala ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ DVD collections ma na-achọ na-ekiri ha na Windows 10. Echegbula onwe gị, e nwere ụfọdụ Uzo mkpirisi Ịnwere ike-amalite. Na-agụ na-esi nkọwa ndị ọzọ.
Ngwọta 1: Olee otú iji tọghata DVD na-egwu na Windows 10 si Windows Media Player
Ngwọta 2: Olee otú igwu egwu DVD na Windows 10 na-atọ ndị ọzọ media Player
Ị nwere ike ina-eji na-egwuri egwu azụ gị media faịlụ na Windows-agbakwunyere media Player, na ọ ga-eweta nsogbu ka ịgbanwee gaa na ndị ọzọ egwuregwu. Ma unu adịghị nwere ọtụtụ nhọrọ ugbu a ebe ọ bụ na DVD playback a adịghị na Windows 10. Luckily, e nwere ihe a ngwọta ebe ị nwere ike igwu DVD kpọmkwem Windows Media Player. Nke ahụ bụ iji tọghata gị DVD (gụnyere ndị ọhụrụ DVD) n'ime Windows Media Player si enyi na enyi formats dị ka onye na WMV, AVI, MPEG ma ọ bụ wdg E wezụga ịbụ ike playback a DVD were were, ị nwekwara ike ndabere gị DVD site ọkọ. Nnọọ uru, ọ bụghị ya? A bụ otú ime ya.
Rịba ama: Iji tọghata DVD gị chọrọ format ọsọ ọsọ na mfe, na Wondershare Video Ntụgharị ukwuu tụrụ aro. Ọ na-juru n'ọnụ na oké mma, elu arụmọrụ na mfe (na okwu nke interface). Ị nwere ike nweta FREE download nke ikpe mbipute ebe a:
1 Ibu Ibu gị DVD faịlụ
Na-agba ọsọ a usoro na pịa Ibu Ibu DVD ịgbakwunye gị DVD faịlụ. Alternatively, ị nwere ike ịdọrọ Video_TS nchekwa kpọmkwem n'elu interface. DVD diski, ISO faịlụ, DVD na nchekwa ma IFO faịlụ na-niile na-akwado.
Mgbe ebugote, ị nwere ike chepụta faịlụ aha, họrọ ọkacha mmasị gị ndepụta okwu, audio track na pịa play icon ka ịhụchalụ ha.
2 Họrọ gị họọrọ mmepụta format
Pịa na mmepụta Format iji nweta ndọpụta menu. Ebe ị ga-ahụ na a dịgasị iche iche nke formats na ngwaọrụ presets. Na Format taabụ, Biko họrọ WMV si Video subcategory.
Cheta na: E wezụga converting na DVD na WMV faịlụ maka na-egwuri egwu Windows Media Player, ị nwekwara ike tọghata otu AVI faịlụ n'ihi na PSP, Xbox na Blackberry; na-MOV faịlụ maka QuickTime ma ọ bụ iTunes; na-FLV faịlụ maka YouTube; MP4 maka iPod, iPhone, iPad; na ọtụtụ ndị ọzọ.
Atụmatụ: Nke a Video Ntụgharị na-enyekwa aka-na-edezi atụmatụ. Ị nwere ike mfe ubi na nwa n'ọnụ, ewepụtụ si na-achọghị akụkụ, tinye pụrụ iche video mmetụta, tinye ndepụta okwu na wdg biko rụtụ aka na User Guide maka nkọwa ndị ọzọ.
3 Malite iji tọghata DVD na Windows 10
See tọghata bọtịnụ mgbachapụ DVD akakabarede maka Windows 10 ozugbo. All ihe aga-eme ga-eme na ngwa ngwa ọsọ na elu mma. N'otu oge ahụ, ọganihu mmanya ga-egosipụta na pasent na fọdụrụ oge nke akakabarede. Bingo! Ị na-mere ya! Ugbu a, i nwere ike playback converted DVD na Windows 10 Media Player na-enweghị mmachi.
Ị nwekwara ike gbalịa si ụfọdụ nke eluigwe na ala Player n'okpuru (kpam kpam free) iji na-ele gị DVD na Windows 10:
Wondershare Player: Na a ọtụtụ nke video na ọdịyo formats akwado: gụnyere DVD, AVI, MKV, MP4 na wdg, ị nwere ike mfe na lorịị egwu a DVD diski na Windows 10 na Wondershare Player. E nwere ihe agaghịkwa mkpa nke na-eche na diski na-kwajuru ma ọ bụ na-enwe na-atachi obi na mberede jerks ma ọ bụ he ebe na-ekiri video. Ọ bụ oge na-azụ na-achịkwa gị playback ugbu a!
VLC: Ọ bụ ihe na-emeghe-iyi, ukwuu-obere free Media Player, na ihe ndị kasị ewu ewu n'etiti ma Windows na Mac ọrụ. The sobtaitel si ngosi bụ ọtụtụ smoother tụnyere ndị ọzọ Player na ị nwere ike mfe achọ mmasị Mpaghara na ya vasatail edinam buttons. The VLC ọkpụkpọ bụ ike playback were were a DVD diski, DVD nchekwa ma ọ bụ ISO image faịlụ. Nanị downside bụ na-agbanwe agbanwe akpụkpọ atụmatụ adịghị arụ ọrụ na a Mac OS X.
MPlayer: MPlayer bụkwa a dị ike mgbasa ozi ọkpụkpọ na-akwado tọn video formats na-agba na Mac, Windows na Linux usoro. Jiri ya tụnyere VLC, MPlayer atụmatụ ya playback on Blu-Ray DVD, ezie na ọ bụghị niile nzọụkwụ na-edozi site MPlayer onwe ya. Ọ bụ na-uru banyere na echichi na-ewe elu-erughị ohere na draịvụ ike gị.
Top 10 Free DVD edemede Software
H.264 ka DVD: Olee Ọkụ H.264 faịlụ ka DVD Discs